I-USA: ilayisense lokwenza ama-braids - i-Afrikhepri Fondation
I-USA: ilayisense yokwenza amabhande
AE-United States, amakhulu abagundi bezinwele abavela e-sub-Saharan Africa abagxile kakhulu ekulolongeni balwela imithetho emisha ebaphoqa ukuthi bathathe ukuqeqeshwa okubhekwa njengokude kakhulu futhi kubize kakhulu.
Kukhona "ubuhle" ...
Manje, ezifundeni ezingaba ngu-2500, noma yimuphi umuntu ozobamba izinwele uzodinga ukunikwa ilayisensi noma abhekane nezinhlawulo ezifika ku- $ XNUMX ngokwephula ngakunye. Le layisensi, eyenziwe ngaphansi kwengcindezi evela emikhakheni yezinwele, ihlose ukulawula ikhwalithi yezobuchwepheshe namazinga okuhlanzeka wabasebenzi. Ngakho-ke abeluki, ngakho konke ukungakhethi, bangaphansi kwamazinga afanayo njengabo bonke abalungisa izinwele nabasebenza ngobuhle.
Ukukhulisa izinga lekhwalithi lomkhakha ngokuqeqeshwa kuyinto enhle kukodwa. Ngempela, lo mkhuba awunangozi ngoba ukwaluka kungadala ukungezwani komzimba (izintambo zokwenziwa) kanye ne-alopecia ngenxa yokudonsa okwenziwe ezinweleni nokungakwazi ukuhlanza izinwele ngaphansi kwamagoda nezindwangu. .
… Kepha kukhona "nobubi"!
Babuthana ngokuhlanganyela (ikakhulukazi Freedom Braiding), abalungisa izinwele bayahleleka futhi benyukela epuletini. Abameli babo sebephumelele ukucindezela noma "ukunciphisa" ukunikezwa kwale layisensi kwezinye izifundazwe (Washington, New York, Utah, Arkansas) ngokubeka izimpikiswano eziningana.
Ukuphepha: ukwaluka kulula, kuphephile. Abeluki abawasebenzisi ama-relaxer ezinwele noma amakhemikhali odayayi. Azimazi ngisho nezinwele zamakhasimende ezimanzi.
Isiko: ukwaluka kungumkhuba wendabuko, owedluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane kusukela ebuncaneni. Isikhathi sokuluka siphinde sidale isibopho senhlalo, kuyindlela yokusebenzisa umzuzu wobungani phakathi kwabesifazane: siyahleka, sixoxa amahora amaningi.
Isipiliyoni: alukho uhlelo lwe-VAE (ukuqinisekiswa kolwazi olutholakele ngokuhlangenwe nakho) okungavumela labo abangafakazela umkhuba weminyaka eminingana ukuthi bazuze ngokuzenzekelayo kwilayisense.
Izindleko nobude bezifundo zokuthola le layisensi kubhekwa ngokweqile. Kuye ngohulumeni, lokhu kuhluka phakathi kwe-40h kanye ne-2s kanye ne-minerval yezikole ezithile ezizimele zingakhuphukela ku-20000usd.
Izinga lezemfundo: Imvamisa, la malayisense adinga okulingana nediploma evela esikoleni saseMelika. Abokufika abaningi base-Afrika abanalo nje ulimi olushelelayo nalelo banga lemfundo.
Funda kabanzi kubhulogi yami: Ubuhle be-Panafrican
I-Ashwagandha ilwa nokungabi namandla futhi ivuselele i-libido
UGluten: Indlela ukolweni wanamuhla osimaza ngayo - uJulien Venesson
Kuvulwe uPistis Sophia - USamaël Aun Weor (PDF)
IQuran Engcwele (PDF)
Bukela iminyaka eyi-12 eyisigqila (2013)